Local News – Shwe Yoe
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေးရေးသည် “မဖြစ်နိုင်စရာ မရှိ” ဟု ကောက်ကာငင်ကာ ပြောဆို လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း
Shwe S N | July 3, 2022
သူ၏ အပြောပေါ် သုံးသပ်မိသမျှ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ဇော်မင်းထွန်းမှ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေးရေးသည် “မဖြစ်နိုင်စရာ မရှိ” ဟု ပြော၍မရကြောင်း ကောက်ကာငင်ကာ ပြောဆိုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။မကြာသေးမီ အတောအတွင်းကပင် “ဥပဒေ အထက် မည်သူမျှ မရှိ” ကို ၎င်း၏ ပါးစပ်ကပင် ပြောဆိုထား ပြီးဖြစ်သည့်အပြင်
ထူးခြားမှုတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ကျော် ပြီးဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ဒီအိမ် ( ရုပ်/သံ)
Shwe S N | June 30, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ ဗေဒင်လောကမျာတော့ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခဆိုတာ မသိတဲ့ မရှိလောက်အောင်ကို ဖြစ်ရတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ် …. ယခုအခါမှာတော့ သူ ရဲ ရည်ရွယ်ကတစ်ခုအကြောင်းကို ပရိသတတွေ သူအောင် ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆရာကြီးကတော့ သူကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ ထားချင်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို သူရဲ့ ညီအရင်းကနေ ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တယ်
စား အုန်း ဆီဈေးနှုန်း များ စ တင် ကျ ဆင်း လာ …….အိမ်ရှင်မတွေ ပျော်ရမှာ လားဆိုတာကတော့
စားအုန်းဆီ တစ်ပိဿာ လျှင် ကျပ် ၉၀၀၀ ကျော်မှရှိနေရာမှ ယခုအခါ ဈေးပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်း စားအုန်းဆီအရောင်းဆိုင်များက သိရသည်။“ဈေးကတော့ ကျလာပြီ။ ၇၈၀၀ ဝန်းကျင်လောက် ထိ ပဲရှိတော့တယ်။ ထပ်ကျဖို့ရှိတယ်”ဟု စားအုန်းဆီအရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်မှ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်နှင့်ဈေးနှုန်းများ အပေါ်အခြေခံ၍ ဇွန်လ ၂၀
လူတွေအတွက် သံပုရာသီးက ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
Shwe S N | June 29, 2022
၁-ခံ တွင်း ကျန်းမာရေး သံပုရာသီးဟာ သွားကို ဖြူစေ ပါတယ်။ သံပုရာသီး အခွံကိုဆား (တကော်စာ)နဲ့ ရောပြီး ပွတ်ပေးရင် သွားကို ဖြူစေ ရုံတင် မကဘူး။ တောက်ပ စေပါ တယ်။ ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းတာလည်း ပျောက်စေ ပါတယ်။ သွားကိုက် နေရင်လည်း သံပုရာရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်း ပေးပါ။
တောထဲ တောင်ထဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးမရှိဘူး ဆို ရင် ငှက်ပျောပင် ကို သတိရပါ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများအတွက် အနာကျက်တဲ့ငှက်ပျောစေးအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငုတ်ထိုး ခြေချော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ သွေးထွက်သံယို အနာတရ ဖြစ်တတ်ကြသည်ကလူတိုင်းသဘာဝပင် ဖြစ်ပါ၏။အချို့သောဒဏ်ရာအနာတရ ဖြစ်ပါလျှင် ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမည်မသိအခက်တွေ့တတ်ကြပါ၏။ ဆေးလည်းမသိ ဆေးလည်းမရှိဆေးရုံဆေးခန်းတို့ဖြင့် ဝေးကွာပါလျှင် ငှက်ပျောပင်ကိုသတိရကြပါ။ငှက်ပျောပင်ကိုခုတ်လိုက်ပါ အစေးများထွက်လာပါမည်။ ထိုအစေးဖြင့်ဒဏ်ရာကိုသုတ်လိမ်းပြီးအဝတ်စည်းထားလိုက်ပါ။ သွေးတိတ်သွားပါမည်။၂ ရက် ၃ ရက်ကြာလျင် အနာကို ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။အံ့ဖွယ်အနာကျက်ပြီးဒဏ်ရာ ပျောက်ကင်းနေမည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အမှတ်မထင်ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ပါမူငှက်ပျောပင်ကိုသတိရကြပါစို့။နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်၃၆၄အနာကျက်တဲ့ငှက်ပျောစေး Crd
၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ထိုင်းဆရာတော်ပေးတဲ့ (3D)အပိုင်တစ်ကွက်…..
မှန်လွန်းလို့ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရတဲ့ ထိုင်းဆရာတော်ရဲ့ သိန်းတစ်ရာတန် 3လုံးထီ ဒိုင်ကွဲ ဂဏန်းရပြီ။အောက်ဆုံးပါ(၇)ရက်သားသမီး အားလုံးရစေဖို့ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားပါတယ် ထွက်ရှိမဲ့ 3D ဒဲ့ပေါက်ဂဏန်းဒဲ့ (1)ကွက် အပိုင်ချပေး နေပါပြီနော်။ သိန်း(100)တန် ထိုင်းvipကဒ် အစစ်ပါအနီးကဒ် ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ ဒီအပင် ဒီအကြိမ်မှာ ချဲပေါက်ချင်သူမှန်သမျှ ပေါက်ဖူးသွားစေရမယ် ငွေတွေကို အလျှံအပယ်သုံး ငွေကိုရေလိုသုံး/ငွေဒင်းဂါးကိုထွေခင်းကစားမယ်
အဆိုတော် မူးလာ ကတော့ သူရဲကောင်းဆန်ဆန် ပေးဆပ်သွားတဲ့ ကျဆုံးရဲဘော်လေး အတွက် ရင်နာမဆုံး ဖြစ်နေ
ကရင်တိုင်းရင်းသားလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စောခရစ် မူးလားကတော့ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းစွဲအဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယျဉ်ပြိုင်ရင်း လူသိများနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ မူးလာ ဟာသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှု့ကို တစ်ခဲနက်ရရှိထားသူလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။မူးလာ ဟာ ရော့ခ်ဂီတကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး ရော့ခ်သီချင်းတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲသီဆိုနိုင်တဲ့ဂီတအနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ မူးလာ ကတော့ မိသားစုနဲ့ဝေးရာ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေပြီးကျရာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်နော်။ဒီကနေ့မှာတော့ တိုက်ပွဲအတွင်းကျဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူ့ရဲဘော်လေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ
နောက် ၂၄နာရီမှ ၇၂နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းပေးထား တဲ့ အတိုင်း မိုးရွာပါတော့မယ် ဒေသတွေကို ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာမလေး စုစုစံ
နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ပြင်ဦးလွင် နောင်ချို ဂုတ်ထိပ် ကျောက်မဲ သီပေါ လားရှိုး သိန်းနီ၊ ကွတ်ခိုင် မူဆယ် နမ့်ခမ်း နမ္မတူ မိုးမိတ် မိုးကုတ်မြို့များမိုးများစွာရွာလာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 28/06/2022ထီးလင်ဖက်ကမိုးတွေက မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်ဖက်ကိုဆင်းလာနေပါတယ် satellite Eumetsat 28/06/2022ဂန်ဂေါ ရေမျက်နီ ပုံညာ ကျောမြို့ ပုံတောင် မိုး⛈၊
လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ အတွဲအကြောင်းကို ၇၀ နဲ့ ၂၇ အကြောင်း စပ်စုလိုက်တဲ့အခါ. . .
လိုင်းပေါ်လူပြောများတဲ့ အတွဲအကြောင်းကိုစပ်စုလိုက်တာ အဖွဲ့တွေမှအမျိုးမျိုးကွဲနေကြတာ ။အမယ်လေး ဒီအရွယ်ရောက်မှ ရွတ်တွနေပြီ လင်စိတ်သားစိတ်မကုန်သေးဘူးလားမသိဘူး ငါတို့များတော့ ရှိတဲ့ဟာတောင်ပြန်အမ်းချင်နေတာဆိုတဲ့ လင်တားစိတ်ကုန်ခမ်းနေသူတွေက တစ်ဖွဲဒီအရွယ်ကိုဟယ် ဘုရား တရားနဲ့နေရမှာ ကောင်ငယ်ငယ်လေး ယူပြီး ဂယက်ထနေတယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားတရားသမားတွေက တစ်ဖွဲ့ဟယ် အဖွားကြီးကချမ်းသာလို့ အပိုင်ကြံတာ တစ်နေ့ဒုတ်ခွနဲ့လှလှတွေ့တော့မှာပဲဆိုပြီး အနာဂတ်အကျားမြင်ဆရာကြီးတွေက တစ်ဖွဲ့ သြော် ဖူးစာဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါလားနော် ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတဲ့
ကင်းအဆိပ် အမျိုးမျိုး ကိုက်ရင် စိတ်ပူစရာ မလို့တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း
ကင်းမြီးကောက်၊ ကင်းခြေများ၊ ကင်းမလက်မည်း စသည့် ကင်းအမျိုးမျိုးအကိုက်ခံရလျှင် အောက်ပါ သဘာဝဆေးနည်းဖြင့် ကင်းအဆိပ်ကို ကုသနိုင်ပါသည်။ ၁-ကြက်သွန်နီ (၃) လုံးကို မီးဖုတ်ပါ။ ၂-မီးဖုတ်၍ နွမ်းလာသော ကြက်သွန်နီကို ထောင်း၍ အရည်ညစ်ယူပါ။ ၃-၎င်း ကြက်သွန် မီးဖုတ်အရည်ကို အကိုက်ခံရသည့် နေရာကို လိမ်းပေးပါ။ ၄-အဖတ်များကိုလည်း အနာပေါ်ကို အုံထားပြီး အဝတ်ဖြင့်